Sharikadda Iveco oo bas casri ah ugu tala gashay xulka Talyaaniga! + Sawirro (Wax ka baro) – Gool FM
Sharikadda Iveco oo bas casri ah ugu tala gashay xulka Talyaaniga! + Sawirro (Wax ka baro)
(Milano) 09 Juunyo 2016 – Sharikadda Talyaaniga ee gawaarida farsamaysa ee IVECO ayaa ku guuleysatay inay noqoto midda daabulaysa xulka qaranka Talyaaniga ee Azzurri iyadoo ugu tala gashay baska nooca ugu dambeeya ee Iveco Magelys.
Xulka ayaa maanta ka dhoofay gegada Milano ku taalla ee Malpensa oo ay uga tallaabeen dalka ay deriska yihiin ee Faransiiska oo ay Isniinta ciyaar bilowgooda kaga horjeedaan Belgium, oo Juunyo 13-keeda kula ciyaarayaan Lyon.
Baskan ayaa ka kooban 48 kursi, dhererkiisu waa 12.8 mitir, wuxuuna sanadan 2016 noqday ”Baska Sanadka 2016” kaasoo ay ugu codeeyeen guddi ka kooban 22 weriye oo isboorti oo ka socda majalladaha Yurub ee arrimahan indha indheeya.
Basaskan ayaa waxaa ku xiran matoorka Iveco Cursor oo ay awooddiisu tahay 380 faras, wuxuuna ku qalabaysan yahay agab casri ah oo maqal iyo muuqaal ah, anteeno satelite ah, qaboojiye iyo Wifi, waxaa sidoo kale wehliyo basas yar yar oo 19 qaad ah.
Xiddiga Tottenham iyo xulka Belgium Mousa Dembele oo idin leh ‘RAMADAAN KARIIM’
Xulka Talyaaniga oo ka amba baxay magaalada Milano + Sawirro